video site ဘယ်လိုရမလဲ အကြံပေးပါ - MYSTERY ZILLION
video site ဘယ်လိုရမလဲ အကြံပေးပါ
December 2010 edited December 2010 in CMS
videio site ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါအုံး http://www.magnify.net ဆိုတာလေးတော့တွေ့ထားတယ်ဗျ အဲဒါဘယ်အခြေအနေရှိလဲ ကောင်းတဲ့ services လေးများရှိရင် recommend ပေးကြာပါအုံးခင်ဗျာ
why not using vimeo ? recommend youtube is the best. If you can't open youtube, try vimeo , another choice.
joomla သုံးပြီး video site လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အောက်ဖေါ်ပြပါ extension နှစ်ခုက တော်တော်လေးအသုံးတည့်ပြီး
ဖရီးလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ ဗွီဒီယို ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်ဖြစ်ဖို့ တော့ အဲဒီနှစ်ခု
ဆိုဒ်နမူနာကိုတော့ အောက်ဖေါ်ပြပါလင့်မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။